Lesson 3.2 -How to use Keygen ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Lesson 3.2 -How to use Keygen
​ခု video ​တွေ​ဟာ ​လတ်​တ​လော ​ရှင်း​ထား​တာ​တွေ ​ချည်း​ပဲ ​ဖြစ်​လို့ ​ကျ​နော်​နေ့​တိုင်း ​ဒု​က္ခ​ခံ​သ​လို ​လေ့​လာ​သူ​တွေ​လည်း ​နည်း​နည်း​လောက် ​ဒု​က္ခ​ခံ​စေ​ချင်​ပါ​တယ်။ ​ခု​က keygen ​အ​ကြောင်း​ပါ။ ​ခု (၄)​နည်း​ကို ​သိ​ရင် ​အား​လုံး​ကို ​အ​ဆင်​ပြေ​ပြေ​နဲ့ Fullversion ​လုပ်​နိုင်​သွား​ပါ​ပြီ။ ​လေ့​ကျင့်​ခန်း​ကို ​နား​မ​လည်​မှာ​စိုး​လို့ software ၂ ​ခု​ကို ​လုပ်​ပြ​ထား​ပါ​တယ်။ ​တစ်​ခု​ကို video ​တစ်​ဖိုင်​စီ ​ခွဲ​ထား​ပေး​ပါ​တယ်။ ​ပ​ထ​မ video ​ဖိုင်​နဲ့​နား​လည်​ရင် ​ဒု​တိ​ယ ​ဖိုင်​ကို ​မ​ကြည့်​လည်း​ရ​ပါ​တယ်။ ​ပ​ထ​မ​ဟာ​ကို ​နား​မ​လည်​ရင် ​ဒု​တိ​ယ video ​ဖိုင်​ကို ​ဆက်​ကြည့်​ပါ။ ​တ​ကယ်​တမ်း​တော့ ၂ ​ဖိုင်​လုံး​ကို ​ကြည့်​ထား​သင့်​တာ​ပါ။ keygen ​ပုံ​စံ​ချင်း​မ​တူ​ပါ​ဘူး။ ​အဲ့​ဒါ​ကြောင့်​ပါ။
(​ပ​ထ​မ ​လေ့​ကျင့်​ခန်း Video)
Zippyshare | Solidfile | Ziddu | Sharebeast | Tusfile | Filecloud | Mirrorcreator
(​ဒု​တိ​ယ ​လေ့​ကျင့်​ခန်း video)
Zippyshare | Solidfiles | Ziddu | Tusfiles | Filecloud | Mirrorcreator
mgmg July 18, 2013 at 3:03 PM
Youtube ​က video ​ကို Download ​လုပ်​နည်း (၂)​နည်း...
Lesson 3.4 How to use Patch
Lesson 3.3 How to use Crack
Lesson 3.1 - How to use Serial Number
Facebook ​တွင်​လည်း ​သင်​ခန်း​စာ video ​များ​ကို ​...
Lesson 2.2 Power Options ​အ​ကြောင်း
Lesson2Standard user ​အ​ကောင့်​တစ်​ခု​ကို ​ဘယ်​လ...
How to set up Zawgyi in browser setting and gtalk
Lesson 2-1 How to remove Programs From your PC
Lesson (2) User Account ​ဖြင့် ​ကွန်​ပျူ​တာ​သုံး​စ...
How to install Zawgyi
​ယ​နေ့ (8-july-2013) ​ရက်​နေ့​မှာ Online ​အ​ခ​မဲ့ ...